16 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနိယာမများ - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်
Recovery ကို၏ 16 အခြေခံမူ
ငါရယ် 100 P, PMO, MO မရှိဘဲနှင့်အနည်းဆုံး p-subs သို့မဟုတ် edging နှင့်အတူ, ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင် / reboot အားထုတ်မှုသို့ရက်ပေါင်း။ ငါသည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာမတိုင်မီရှည်လျား Streak hit ။
ဒီအခြေခံမူတစ်ခုစီကကျွန်တော့်ကိုအောင်မြင်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီပေးခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုအောက်ပါအခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် -
စွဲ: ခလုတ် / cue> တိုက်တွန်း + ထပ်တလဲလဲတုံ့ပြန်မှု = ပိုမိုအားကောင်းအလေ့အထ / စွဲ။
လတ်ြလပ်ခ: ခလုတ် / cue> တိုက်တွန်း + ထပ်ခါတလဲလဲ non- တုံ့ပြန်မှု, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်မှု = အလေ့အထပြောင်းလဲမှု။
ငါတို့ရှောင်ချင်တယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စွဲရောဂါ - မော်ဒယ်များ (12- အဆင့်အမျိုးအစားများမော်ဒယ်များ) မှအဖြစ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီ၊ ဒီရည်မှန်းချက်မရှိရင်ဘယ်လိုဘဝမျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ထဲထားထားပါ။
မှတ်ချက် - ၁၂ ချက်အဆင့်အုပ်စုများသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်သင့်ကိုကူညီပါက၊ ငါမခေါက်ဘူး!
မင်းဟာစွဲလမ်းသူတစ် ဦး လား။ သင်ကညစ်ညမ်းတဲ့သူလား။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ AA မှာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်ခါတုန်းကအရက်ကမင်းဟာနှစ်တွေတစ်စက်မထိခဲ့ဖူးဘူး၊
၃။ ချုံးပြီးနောက်ချက်ချင်းပြန်ခုန်ထွက်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက် -
အားလုံးချုံး၏အကြောင်းရင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်အတွင်းမှမြင်ခြင်း။ ၎င်းကိုပြင်ပအခြေအနေများ၊ အစပျိုးမှုများသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများအပေါ်အပြစ်မတင်ပါနှင့်။ ဒီဟာကိုသင်မြင်ရတာမြန်လေ၊ သင်ပြန်ခုန်ထွက်လာပြီးအကြိမ်နည်းသွားလိမ့်မယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှုမကြာခဏရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ သင်“ သင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး” ကိုတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားနေလျှင်ပင်၎င်းကိုသင်စဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကို (နေ့စဉ်) သတ်မှတ်ပြီးပါက၎င်းကိုမမေ့ပါနှင့်။
၅။ မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်သတိရှိခြင်းကို သုံး၍ တိုက်တွန်းချက်များကိုပယ်ချပါ။
တိုက်တွန်းမှုများကိုခံရသောအခါ၎င်းတို့အားပြင်ပမှလေ့လာသုံးသပ်သူအဖြစ်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ သင်၏သွေးခုန်နှုန်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်၎င်းငြိမ်သက်သွားလျှင်သတိထားပါ။ ပြင်းထန်သောအသက်ရှူခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။ မဆိုပြန်လာတိုက်တွန်းမှုအတွက်အထက်ပါကိုပြန်လုပ်ပါ။
၆။ အလှအပလေးစားမှုဟာတဏှာမဟုတ်ပါ၊ ခြားနားချက်ကိုသိပါတယ်။
မိန်းမတစ် ဦး သည်လှပလျှင်၎င်းကိုဝန်ခံပါ။ အဆင်ပြေပါတယ် ထို့နောက်, ပေါ်မှာမနေပါနဲ့။ အဲဒါကိုမစွဲလမ်းပါနဲ့ သငျသညျယခုထိန်းချုပ်မှုနေ, အခြားခွေးရဲ့ Butt ကို sniff ဖို့ကြိုးစားနေခွေးမဟုတ်! လူအများရှေ့တွင်တပ်မက်ခြင်း၏ဆန္ဒသည်စိုးရိမ်ခြင်းလော၊ သို့မဟုတ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောစိတ်ခံစားမှုလိုအပ်ချက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပါ။
၇။ 'အစပျိုးခြင်းများကို' အဖြစ်အဖြစ်ပြောင်းပါ။
'အစပျိုး' ဟူသောအယူအဆသည်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်ပအခြေအနေများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများသို့မဟုတ်အတိတ်ကစိတ်ဒဏ်ရာများကိုပါဝါများလွန်းစေသည်။ အချက်များကွဲပြားခြားနားသည်ရိုးရှင်းစွာကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အထကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးသောအပြင်ဘက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သကဲ့သို့။ သူတို့ဟာခေါင်းလောင်းသံမြည်နေသလို၊ ရလဒ်အနေနှင့် Pavlov ရဲ့ခွေးလည်းမြည်လာသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝကျပြီးသင့်အားတစုံတခုကိုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းများမရှိပါ။ ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းမင်းကအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်ထားတယ်၊
၈။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါ။ သင်၏တွန်းအားသည်အလေ့အထလား၊
တခါတရံမှာကျွန်ုပ်တို့ကပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုကိုခံနေရပြီး၎င်းကိုအလွယ်တကူပယ်ချနိုင်သည်။ အခြားအချိန်များ, cue ပိုမိုနက်ရှိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့အကြောင်းကိုဒါအကဲဖြတ်လို့ရမလား။
ဝိညာဉ်ရေးသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုနက်ရှိုင်းသောမောင်းနှင်မှုမှလာသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ သင်သည်ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်ပါကသင်ဆုတောင်းပြီး၊ တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများခံနေရစဉ်၊ သင်၏ဇနီးထံချဉ်းကပ်ပြီးသူနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်လျှင်အမှားအယွင်းမရှိပါ။ 'chaser effect' ကိုမကြောက်ပါနဲ့၊ သင်က 'real-world' လိင်ကိုကူးပြောင်းနေမှာပါ။
သတိပြုရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း 'chaser-effect' တိုက်တွန်းမှုများကိုကိုင်တွယ်ပါ။
“ နှိုးဆွမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကြားတွင်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ ကြောင်းအာကာသအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုန့်ပြန်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုနှင့်လွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်။
- ဗစ်တာအီး Frankl
တချို့ကအအေးခန်းတွေသောက်ကြပါတယ်။ (ကျွန်မမဟုတ်ပါ)၊ အချို့ကမူသူတို့သတိပေးချက်ပေးထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဖွင့်မီစောင့်ဆိုင်းသည်။ ကြားဖြတ်အစာရှောင်ခြင်းသည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ရန်ကူညီသည်။
ရှည်လျားသောရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ခြင်းသည်တစ်နှစ်လျှင်ရက်ပေါင်း ၉၀၊ ရက်ပေါင်း ၁၂၀၊ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည်၊ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပန်းတိုင်သည်မကျော်လွှားနိုင်သကဲ့သို့လက်တွေ့မကျနိုင်ပါ။ ရှည်လျားသောပန်းတိုင်ထားပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုကိုက်သောအသေးစားရည်မှန်းချက်များအဖြစ်သို့ချိုးဖဲ့ပါ။ ဥပမာတစ်ခုငါ့ရည်မှန်းချက် 120 ရက်ပေါင်း 15 ရက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ 8 စုံသို့ခွဲခြား။
ဤအရာသည်သင့်အတွက်မည်သို့ပြန်လည်စတင်သည်ကိုသိရှိပါ။ ဒီဟာကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမပြုပါနှင့်၊ ပိုကောင်းတဲ့အလျှော့မပေး reboot / recovery ကိုရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်စိထဲမှာကြည့်နိုင်လား သင်ကိုယ်တိုင်လည်ချောင်းဖြင့်ဖမ်းဆုပ်နိုင်ပါသလား (အကဲဖြတ်မှုမရှိပါ) ။ ခွေးသေကောင်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုရနိုင်မလား။
ဒါကဒီအလေ့အကျင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ယူမယ့်အရာဖြစ်တယ်, ဒါကိုအစဉ်မပြတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်း (P-subs, edging) ကိုတွေ့ပါက refocus လုပ်ပါ။
အခြားသူများကိုသူတို့၏ဂျာနယ်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ အကူအညီပေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများသည်မပြည့်စုံသေးသည့်တိုင်မည်သူသည်အားပေးမှုလိုအပ်သည်ကိုသင်ဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ပါ။
သင်ရုန်းကန်နေရပြီးအခြားသူများကထောက်ခံမှုပေးသည်ဆိုပါက၎င်းကိုပေးထားသောနေရာမှလက်ခံရန်သင်ယူပါ။ အချို့မှာခိုင်မာသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိကြသည် (သို့) အောင်မြင်မှုရနေသောကြောင့်အနည်းငယ်ချွန်ထက်လာသည်။ သူတို့၏အကူအညီကိုငြင်းပယ်မည့်အစားသူတို့၏ပြင်းထန်သောစကားလုံးများကသင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သလား။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အရုပ်ဆိုးသောခံစားမှုဖြစ်ပါက၎င်းတို့သည်လူရှုပ်များကဲ့သို့သင်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည်။ သင်၏ချဉ်းကပ်နည်းသည်သင်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်၊ သင်၏နည်းလမ်းသည်အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်တပ်မက်ခြင်းစသောအလေ့အကျင့် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်ဆွဲဆောင်သောအရာကဘာလဲ။ ၎င်းကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းသောလိုအပ်ချက် (သို့) ပြissueနာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်လား။ P, PMO နှင့် MO တို့ကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်အားလုံးသည်ပျော်စရာအချိန်အနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်များကြာနောင်တရခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးပျက်ပြားခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောခေါက်ဆွဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၁၆။ ဤအရာကိုရိုးရှင်းသောအလေ့အထ - ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ရှုမြင်ပါ။ ၎င်းကိုသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အတိတ်ကစိတ်ဒဏ်ရာများနှင့်မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။
သငျသညျငါးနှစ်အရွယ်မှာဖြစ်ပျက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြေရှင်းရန်, ဒါမှမဟုတ်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း untangle ရန်မလိုအပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်လွတ်လပ်မှုကိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအလေ့အထသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ငယ်များဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့လမ်းမှပြန်ထွက်သွားရတော့သည်။
LINK - Recovery ကို၏ 16 အခြေခံမူ